Vechidiki Vanosungwa paMuzinda weMDC, weMorgan Richard Tsvangirai House
VaPaul Gorekore (vari kuruboshwe) ndemumwe wevechidiki vanonzi vasungwa pamuzinda weMDC weMorgan Richard Tsvangirai House muHarare.
Vechidiki veMDC vanosvika vasere, kusanganisira VaPaul Gorekore, vanonzi vasungwa pakati peusiku vachipomerwa mhosva yekupaza nekupinda mumuzinda weMDC weMorgan Richard Tsvangirai House uri muHarare.
Munyori mukuru webato reMDC-T riri kutungamirirwa naMuzvare Thokozani Khupe, VaDouglas Mwonzora, vanoti vechidiki ava ndevebato reMDC Alliance uye vari kuvapomera mhosva yekupaza chitoro chebato ravo chinotengesa nhumbi dzebato, uyewo kutora mimwe michina inoshandiswa mukudhinda magwaro ebato ravo.
VaMwonzora vanoti vechidiki ava vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare neChipiri vachipomerwa mhosva yekupaza nekupinda muchivakwa vasina mvumo.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo varamba kuti vechidiki ava ndevebato ravo.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi vati vanga vasati vave neruzivo rwekuti kune vechidiki veMDC vasungwa sezvo vati vanga vasiri muhofisi nguva yatavaba.
Vechidiki ava ndevamwe vevakambenge vatora muzinda uyu nechisimba vachiti vcvanoda kuti vatungamiri vemapato maviri anoti MDC Alliance neMDC-T vatange vagara pasi vagadzirise gakava riri pakati pemapato maviri aya.
Asi bato reMDC-T rinoti rakazobudirira kubvisa vechidiki ava pamahofisi aya svondo rapera.
Zvichakadaro, VaMwonzora vanoti bato ravo nhasi rabudawo nechisungo chekuti richaita musangano weExtra Ordinary Congress kubva musi wa13 Zvita kusvika musi wa20 Zvita, apo nhengo dzebato ravo chete dzichasarudza mutungamiri webato.